जुलाई 18, 2019 जुलाई 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments छोरी, डा. राम बहादुर बोहरा
छोरी घरकी लक्ष्मी हुन भन्दा फरक छैन किनभने वावु आमाको पिडा छोराले होइन छोरीले बुझ्न सक्छिन भन्ने मलाई लागेको छ । छोरा भएपनि, छोरी भएपनि अभिभावकले समान सन्तुष्ट प्राप्त गर्छ । अंश र वंशका लागि ‘छोरा हुनैपर्छ’ भन्ने पुरातन मान्यतालाई त्याग्दै जानुपर्छ ।
पहिलो सन्तान छोरी जन्मि सकेको भए दोस्रो सन्तान छोरा होस् भन्ने लाग्छ । यो उनीहरुको व्यक्तिगत कुरा हो । यद्यपी गर्भ रहेपछि भ्रुणको लिंग पहिचान गर्नु र भ्रुणहत्या गर्नुलाई धार्मिक, सामाजिक, कानुनी रुपले मान्यता दिदैन ।
डिम्बमा दुई ‘एक्स’ क्रोमोजोम्स मात्रै हुन्छन् भने शुक्रकिटमा ‘एक्स’ र ‘वाई’ दुवै क्रोमोजोम हुन्छन् । महिलाको एक्स क्रोमोजोम र पुरुषको वाई क्रोमोजोमको मिलन भएमा छोरा जन्मिन्छ भने महिलाको एक्स क्रोमोजोम र पुरुषको पनि एक्स क्रोमोजोम नै मिलन भयो भने छोरी जन्मिन्छ ।
यदि तपाईं छोरी चाहनुहुन्छ भने आफ्नो खानपानमा म्याग्नेसियम, क्याल्सियम र एसिडिक खानेकुरा जस्तै मकै, मासु, गेडागुडी, माछा, प्लम्स, कफी, अण्डा, कलेजो, र दही आदि समावेश गनुहोस् । यसले छोरीको सपना पुरा गर्ने देखिन्छ ।
यदि तपाईं छोरी चाहनुहुन्छ भने लिंगलाई योनीको भित्रसम्म पुर्याउन आवश्यक छैन । योनीको प्रवेशद्धारमै स्पर्म छोडेको भएपनि छोरी जन्मिन सक्छन् किनभने यो स्थानमा योनी धेरै एसिडिक भएको हुन्छ । यो एसिडिटीले कमजोर मेल स्पर्मलाई रोक्छ र फिमेल स्पर्म बाँचेर जान्छ ।
यदि छोरा जन्माउन चाहनुहुन्छ भने यी खानेकुरा खानुहोस् सोचे जस्तो फल मिल्ने छ ।
त्यस्तै यदि तपाई छोरा चाहनुहुन्छ भने विभिन्न दूग्ध उत्पादनहरुको सेवन बन्द गर्नुहोस् । म्याग्नेशियम र क्याल्सियम सप्लिमेन्ट्स लिन पनि कम गर्नुहोस् । यसको सट्टा ताजा फलफूल, पोटेसियममा धनी खाना जस्तै केरा, एल्कालाइनिसिङ खानेकुरा जस्तै अंगुर, चेरी ताजा कागती दाल एभोकाडो, बदाम गाँजर, स्प्राउट्स आदीको सेवन बढाउनुहोस् ।
माथि दिएको जानकारी अनुसार खानपानले समेत सन्तान जन्माउनमा विभेद गर्दछ भन्ने हो । आज समय धेरै परिवर्तन भएको छ । हिजो छोरा भन्नेहरु आज छोरी भन्न थालेका छन् यसको ठोस कारण हो बाबु आमालाई छोराहरूले विभेद गर्नु न पालेर विर्ध आस्रम छोड्नु हेला गर्नु प्रमुख देखिन्छ । तर छोरीले यस्तो गर्न सक्दिनन् किनकि उनलाई सन्तान जन्माएपछी सवै अनुभव भएको हुन्छ ।
छोरा र छोरीमा भेदभाव नगरौं
← बिहीबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ?
शुक्रबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ? →